Lamborghini Terzo Millennio, भविष्य टेक्नोलोजीहरूको साथ एक इलेक्ट्रिक सुपरकार | ग्याजेट समाचार
हामी यसलाई फेरि दोहोर्याउँदछौं: मोटर वाहन भविष्य इलेक्ट्रिक सवारीहरु बाट बित्छ। यस क्षेत्र मा चासो राख्ने उद्योग मा पहिले नै धेरै कम्पनीहरु छन् कि यो फर्काउन असम्भव छ। यसका अतिरिक्त, लम्बोर्गिनी जस्ता कम्पनीहरूले उनीहरूको नयाँ प्रस्तुत गरेका छन् अवधारणा दुई एमआईटी प्रयोगशालाहरूको सहयोगमा (मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी)। परिणाम भएको छ Lamborghini Terzo Millennio, भविष्यको सुपरकारको दर्शन.
ल्याम्बोर्गिनी भविष्यको आफ्नो दृष्टिकोण पुन: निर्माण गर्न चाहन्छ तर डिजाइनको सवालमा यसको मूल चिन्हहरू नगुमाईकन। तसर्थ, यस Terzo मिलेनियोसँग स्पेस आभा छ जुन सबै इटालियन सुपरकारहरूले सडकमा छोडिदिन्छन्। अब, यस परियोजनाको लक्ष्य areas क्षेत्रमा नयाँ परिणामहरू प्राप्त गर्नु हो: ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, नवीन सामग्री, प्रणोदन प्रणाली, दूरदर्शी डिजाइन र भावना। र पहिलो दुई दुई एमआईटी प्रयोगशालाहरू द्वारा कमिसन भइरहेको छ।
ती मध्ये पहिलो, रसायन विज्ञान विभाग र प्रोफेसर मिरसिया डिनका द्वारा निर्देशिततिनीहरू यी सुविधाहरूको सुपरकार सार्न सक्षम हुन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्न परम्परागत ब्याट्रीको प्रयोग नगर्न र सुपरकैप्यासिटरहरू प्रयोग नगर्न प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस्तै, प्रोफेसर Dinca को अर्को चुनौती भनेको एक टीम प्राप्त गर्नु हो जुन समय भन्दा बढि उमेरको हुँदैन र यसको लगाव न्यून छ। त्यस्तै गरी, तपाई प्रत्येक पा wheel्को आफ्नै इलेक्ट्रिक मोटरको साथ राख्न चाहानुहुन्छ र यसरी अझ राम्रो टोक़ दिन सक्षम हुनुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, प्राध्यापक अनास्तासियोस जोन हार्टको नेतृत्वमा मेकानिकल इन्जीनियरिंग विभाग तिनीहरू लेम्बोर्गिनी तेर्झो मिलेन्नेओको डिजाईनलाई अर्को तहमा लैजाने काम गरिरहेका छन्। इटालियन कम्पनी कार्बन फाइबर मा शर्त जारी गर्न चाहन्छ। जे होस्, तपाई के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ कि गाडीको सम्पूर्ण चेसिस भनेको ऊर्जा भण्डार गर्ने ठाउँ हो। जे होस्, होशियार हुनुहोस्, किनकि सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा भनेको न्यानो टेक्नोलोजीको प्रयोग हो ताकि त्यो लाम्बोर्गिनी तेर्जो मिल्लेनिवसँग आत्म-मर्मत गर्ने क्षमता छ; त्यो हो, यसमा स्थिति मोनिटरहरू कुनै पनि विकृतिका लागि खोजमा गाडीको वरिपरि छरिएका हुन्छन्।
अन्तमा, भावना लाम्बोर्गिनीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र तेर्जो मिलेन्नेओले स्टेफानो डोमेनेकीको नेतृत्वमा रहेको फर्मको त्यो विशेषतालाई त्याग्नुहुन्न। त्यसो भए यसले यसलाई धेरै स्पोर्टी ध्वनि पनि दिनेछ अवधारणा कार.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » Lamborghini Terzo Millennio, भविष्य टेक्नोलोजीहरूको साथ एक इलेक्ट्रिक सुपरकार
यी उत्पादनहरू र मूल्यहरू हुन् जुन तपाईं स्पेनमा सियोमी अनलाइन स्टोरमा पाउनुहुनेछ